စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းရေး ထောက်ခံဖို့ အာဆီယံကို တိုက်တွန်း
မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ အတွက် ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းရေးကို ဝိုင်းဝန်း ထောက်ခံ ပါဝင်ကြဖို့ မြန်မာ့အရေး ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားသူများ အဖွဲ့ Burma Partnership က အာဆီယံ နိုင်ငံ အစိုးရတွေကို တိုက်တွန်း တောင်းဆိုလိုက် ပါတယ်။
၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မေလ ၇ ရက်နေ့က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာကာတာမြို့တွင် ကျင်းပသည့် ၁၈ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်လာသော အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် ၁ဝ နိုင်ငံမှ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: AFP)
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျကာတာမြို့မှာ လာမည့် ရက်ပိုင်း အတွင်း ကျင်းပမည့် အာဆီယံ ဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးနဲ့ ဒေသ ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးတွေမှာ မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ အတွက် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့က ဒီကနေ့ ဂျကာတာမြို့ အခြေစိုက် အာဆီယံ ဒေသဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်တဲ့ အာဆီယံ နိုင်ငံတွေက သံတမန်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။
မြန်မာပြည်ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေတွေကို တင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း၊ အာဆီယံနိုင်ငံ အစိုးရတွေအနေနဲ့ မြန်မာပြည် အရေးကို စောင့်ကြည့် လေ့လာ မနေသင့်တော့ကြောင်းနဲ့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ အတွက် ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် ပေါ်ပေါက်ရေးကို ထောက်ခံ အားပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း အဖွဲ့ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရေးမှုး မခင်ဥမ္မာက ပြောပါတယ်။
ဒီအကြောင်း မခင်ဥမ္မာ နဲ့ RFA မခင်ခင်အိ ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက်ကို နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
All Burmese must write to ASEAN to review and remark for the actual and real situation of Burma.
The new Government is neglect the 1990 election is ACCPTABLE oe NOT - must be informed by the diplomatic channel and must inform and request through US's approach.
Jul 15, 2011 04:39 AM
good decision for myanmar country's future